トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Twin Seoul Danho rokutanga pachikuva uye "kuzivikanwa (musangano)" ndizvo
Twin Seoul mumwe mweya nenzira chaiyo
kumashure upenyu kuti [3500 Yen Free yokunyatsoongorora] kuti vafemberi rakakamurwa maviri, ave Dell kudzidza rwendo kuti tinatsiridze nerimwe. Twin Seoul asi chave kuti chinowanzoonekwa huviri varume nevakadzi, izvozvo chikonzero anonzi kunyanya kudzidza nezvorudo varume nevakadzi.
mapatya Seoul, kana haana kurarama chete nguva kakawanda, nokuti isuwo pane yakazaruka, akadai zvakatipoteredza uye zera, kusangana, asi mukana akanaka yakaderera kuti, kuti vasangane sezvo kashoma waunovimba munyika ino Hongu iwe. Vanoziva
mapatya mweya, mweya kuburikidza nguva dzose muzvikamu manomwe basa wezvose ari kuedza kuva munhu. Kana mapatya mweya kunozadziswa, mweya kana kumugumo mukuberekwazve kuva mumwe, tinofanira kuchinja pashure refu nguva uye pechikuva kudzokera yepakutanga chete mamiriro.
ndiro danho kwechikuva "kuzivikanwa (musangano)" wokutanga kwave kazhinji ati ndivo kuti vanowana mumudzimu.
mapatya Seoul uye akasangana
? mweya zvakasimba kubvunzurudza kumboona kuti zvikuru kunzwa kana, kana ini akasangana
mapatya mweya kuyeuka mufaro, uye anoziva ayo kuvapo, asi musangano wokutanga. Patakasangana, kuti icho kazhinji vakarwiswa zvomunguva yakapfuura, akadai pane wamboonana kunyange zvisati, kuti kunzwa chaizvo pfungwa pane zvinhu zvakafanana neimwe nzira. Saka kure hwakareba akasangana hafu muviri asina mufaro kwayo akazviratidza kuti ini sokuti yose pamusoro.
? apo akasangana
mapatya Seoul kubatanidza famba achitsvaka mhiri, mhiri vachange akati pane apo ndakasangana nevamwe vanhu zvakajeka yakasiyana was Zara. Anogona kudzora kuti mweya kukwezva mumwe zvakasimba pachavo, dzimwe nguva zvichiita Tsuppashi 'kutsvaka shamwari, arikunze vanhu uye zvakatipoteredza kana ayo chiito Panewo kubatanidza. In
? takamuka mumudzimu
wokutanga danho, mweya mumwe ari mumudzimu takamuka mamiriro. Soul nemumwe uye kuziva mumwe, tinoenda mumwe kuwedzera pamwero kwomweya. Saka, zviri akarwiswa pfungwa hapana saka Aragai mavari.
Danho rokutanga mapatya Seoul Kusangana ndiyo nguva
mapatya Seoul zvinokwezva mweya pamwero ndiyo nguva kukwezva mumwe panguva mweya pamwero mhiri chinzvimbo uye unhu mumwe, chikonzero uye zvakafanana. nguva ino, asi zvakare kazhinji rudzi rudo pakutanga kuona, kwete nomusi nhandare kuti nokuti kufarira Kutarira sensuously akasvika vapedzisire mupfungwa dzake, vave kuti dzaitongwa kunzwa hazvina.
mune imwe kuziva takasununguka zvikuru kuti kunzwa, unorangarira zvomunguva yakapfuura uye mufaro zvisingagoni kutsanangurwa nepfungwa. Kwaizova uchapupu kuti mumwe vanonzwa mumwe ari mweya. Vamwe vanhu, zvinonzi akati kunakirwa manzwiro, akadai kumuka kudenga. Kana woga kubva musangano wokutanga vakarwiswa chin'a chinoshamisa kunzwa, zvichida kuti munhu ane mapatya mweya.
Re ndiko kungava uchapupu kuti mumwe vanonzwa mumwe ari mweya. Vamwe vanhu, zvinonzi akati kunakirwa manzwiro, akadai kumuka kudenga. Kana woga kubva musangano wokutanga vakarwiswa chin'a chinoshamisa kunzwa, zvichida kuti munhu ane mapatya mweya.